Imveliso yokuXhobisa-iBXL yokuPakisha yoyilo
Yasekwa ngonyaka ka-1999, i-BXL Creative yenye yoyilo oluphambili lweemveliso kunye neenkampani zemveliso e-China.
Intengiso ephambili: i-United States, Canada, France, Germany, Italy, South Korea, kunye ne-Middle East.
Amashishini aphambili: ubuhle, izithambiso / izithambiso, ulusu, isiqholo, ikhandlela elinuka kamnandi, ivumba lasekhaya, ukutya okunesitayile / ukuxhasa, iwayini kunye nemimoya, ubucwebe, iimveliso ze-CBD, njl.
Iindidi zemveliso eyahlukeneyo: iibhokisi zezipho ezishicilelweyo ezenziwe ngezandla, iipelethi zokuhombisa, iibhegi, iisilinda, iinkonkxa, ipholiyesta / iibhegi zeetote, iibhokisi zeplastiki / iibhotile, iibhotile zeglasi / iingqayi Konke malunga nokuPakisha okuCwangcisiweyo.
Umatshini wokuprinta we-Heidelberg 4C
Umatshini wokushicilela waseJamani u-Heidelberg CD102 ukwandisa kakhulu ukuguquguquka kwesixhobo, kunye nokukhutshwa okuphakathi kweebhokisi ezili-100 000 ezenziwe ngezandla kunye neebhokisi zeebhokisi ezingama-200,000 ngemini, ukuqinisekisa ngempumelelo yokupakisha.
Umatshini wokuprinta weManroland 7 + 1
Eyenzelwe ngokukodwa ukuveliswa kweeprinta ezikumgangatho ophezulu, ngakumbi iphepha le-mylar, iphepha leeperile kunye nezinye iintlobo zephepha elikhethekileyo ekunzima ukufezekisa ukusebenza kombala ophezulu. Lo matshini uyigubungela yonke.
Indawo yokusebenzela engenothuli
Ukuze kuqinisekiswe ngakumbi umgangatho wemveliso, umzi-mveliso uxhotyiswe ngokukodwa ngoomasifundisane abangenaluthuli.
Uvavanyo lobushushu, ukuVavanya ukuVavanya, njl., Ukusuka kukhetho lwezinto ukuya kwinkqubo yolawulo ukuya kuvavanyo lwemveliso egqityiweyo, ulungiselelo lweendawo ezili-108 zolawulo lweendawo zokuqinisekisa umgangatho olungileyo wepakeji nganye.
Umzi mveliso weVR Tour